Aza manisa paikady fanaovana mari-trano Martech Zone
Alahady Oktobra 31, 2010 Alakamisy, Septambra 26, 2013 Douglas Karr
Ny tranokala fanoratan-tranonkala dia nalaza nandritra ny folo taona mahery izao. Digg dia mandalo fanaintainana lehibe amin'izao fotoana izao nefa mbola manamboatra ampahany lehibe amin'ny tsena. StumbleUpon, Reddit ary Delicious mbola mitohy mitombo isan-taona.
Na dia mahafinaritra aza ny tranonkala toa ny Facebook sy Twitter amin'ny fampiroboroboana ny rohy ara-potoana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra sosialy anao, ny isan'ny fitsidihana dia hiakatra hatramin'ny farany ary avy eo ho latsaka amin'ny zava-poana rehefa tonga ny onjampeo vaovao manaraka. Tsy ho faty… afaka mamoha ny votoaty taloha izy ireo na manosika ny atiny mety ho anaty tranokalan'ny mpampiasa mifandraika lavitra mihoatra ny onja atolotry ny media sosialy.
Mitombo hatrany ny lazan'ny tsoratadidy sosialy
Torohevitra efatra ho an'ny paikady fanaovana tsoratadidy tsara
Ampiasao ny tranokala tsirairay amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny rohy izay misy ifandraisany amin'ny mpihaino anao sy ireo lohahevitra irinao hananganana fahefana. Raha mampiroborobo fotsiny ny rohinao manokana ianao dia ho toy ny spammer fotsiny ianao ary tsy raharahain'ny ankamaroanao.
Amporisiho ny kaontinao isaky ny tranokala fanoratanao ho an'ny tamba-jotra sosialy sy ireo mpitsidika ny tranokalanao hahafahan'izy ireo mifandray aminao ao amin'ilay tranonkala tian'izy ireo hampiasaina.
Aza manisa milina fanamarihana tsy malaza na vaovao. Matetika ianao dia hahita fa ny isan'ny mpampiasa ambany dia afaka mahazo tombony amin'ny fampiroboroboana anao manokana. Ny mpandray an-tanana voalohany dia mazàna manana fitaomana lehibe, ka ny fahitana azy any dia mety hampiely haingana ny ezaka ataonao.
Toerana fanaovana mari-trano ambony
Yahoo! Buzz - mpitsidika 16 tapitrisa mahery isam-bolana.
Reddit - mpitsidika 15 tapitrisa mahery isam-bolana.
StumbleUpon - mpitsidika 15 tapitrisa mahery isam-bolana.
Delicious - mpitsidika 5 tapitrisa mahery isam-bolana.
Mixx - mpitsidika 2 tapitrisa mahery isam-bolana.
Fark - mpitsidika 1.8 tapitrisa mahery isam-bolana.
Slashdot - mpitsidika 1.7 tapitrisa mahery isam-bolana.
Newsvine - mpampiasa 1.3 tapitrisa mahery isam-bolana.
Diigo - mpampiasa 1.2 tapitrisa mahery isam-bolana.
1 Nov 2010 amin'ny 8:48 maraina
Toro tsara Manana lahatsoratra hafa ve ianao izay manazava bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ireto tranonkala fanoratana ireto?
1 Nov 2010 amin'ny 9:22 maraina
Salama Kenan! Nanoratra momba an'i Stumbleupon aho (https://martech.zone/blogging/stumbleupon-blog-traffic/) kely fa tsy ny hafa rehetra. Samy hafa ny fomba fiasan'ny tsirairay amin'izy ireo… fa ny mahazatra dia ny famelany anao handamina ireo maripezinao. Delicious dia misy fampidirana navigateur tsara ahafahanao miditra avy aiza na aiza ary mahita ny tsoratadidy.
Amin'ny famelana anao manoritra tsoratadidy tranokala iray, hampiroborobo na hizara izany amin'ny namana, hametahana azy amin'ny teny fikarohana ilaina, ny tranonkalanao dia ho hitan'ny olona mitovy zavatra liana aminy. Hevero ho toy ny motera fikarohana 'micro' ny tsirairay amin'izy ireo miaraka amin'ny atiny malaza indrindra hita fa be indrindra ny fifamoivoizana atosika mankany aminy.
5 Nov 2010 tamin'ny 5:11 PM
Vao nanamarika ity lahatsoratra ity tao amin'ny Delicious.
Manontany tena aho hoe firy ny mpivarotra teknolojia orinasa mampiasa SU, Delicious ary hafa?
Na izany aza, raha ny Twitter & FB no entina mankany amin'ny mpampiasa cubicle amin'ny alàlan'ny IT IT, angamba ny tranokala fanoratan-dàlana ara-tsosialy no fomba iray hafa hahatratrarana ny olona…
Jun 9, 2016 ao amin'ny 12: 31 PM
Tsy fantatro fa mbola miasa izao ny fanaovana tsoratadidy
Jun 9, 2016 ao amin'ny 12: 35 PM
Tokony ho 5 taona ity lahatsoratra ity, saingy mbola mahazo valiny lehibe ihany isika amin'ny StumbleUpon amin'ny atiny malaza - toy ny Infographics na White Papers.